कोरोनालाई जित्ने ९ देश , जहाँ अब कोरोनाको बिरामी एउटा पनि छैन, गरे कोरानामुक्त देश घोषणा ! – Khabar Silo
यस्तो भव्य र शानदार बन्यो विश्वकै ठूलो विमानस्थाल ! [भिडियो सहित]
एजेन्सी – चीनले निर्माण गरेको विश्वकै सबै भन्दा ठूलो विमानस्थल बुधबारबाट संचालनमा आएको छ। ११ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर चीनले चार वर्षमा निर्माण गरेको विश्वकै ठूलो विमानस्थल बुधबार देखि खुल्ला गरिएको हो। नयाँ ‘ड्याक्सिङ इन्टरनेसनल एअरपोर्ट’ को औपचारिक उद्घाटन चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले बुधबार गरेका छन्। चीनको ७० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर विमानस्थलको औपचारिक […]
बलिउड अभिनेता अनुपम खेरको परिवारमा पनि कोरोना देखियो